Mpanamboatra rakotra plastika plastika - orinasa mpamokatra sy mpamatsy plastika China
Fromazy ronono K-cup PP Die nanapaka tombo-kase tombo-kase china famatsiana orinasa
Ny lambam-baravarana tombo-kase maty dia Thinner, milamina kokoa ary mangarahara - ho an'ny fonosana fromazy, yaourt, ary vokatra vita amin'ny ronono hafa, manolotra vahaolana avo lenta sy miasa tsara miorina amin'ny PET miaraka amina toetra mekanika sy optika tena tsara izahay. Na eo aza ny firafitra manify kokoa, ny faritry ny fefy famehezana Die dia manome tanjaka famehezana avo kokoa raha oharina amin'ny rakotra mahazatra.
Miorina mandatsa-dranomaso borosy tombo-kase tombo-kase ho an'ny tombo-kase ramen famehezana
Ny fonosana tombo-kase boribory dia misy mangarahara ary misy lacquer tombo-kase hafanana ampahany.
Nanolotra fitaovana PE vaovao misy atiny voaodina izahay. Ity fitaovana ity dia manana fananana optika sy masinina mitovy ihany koa ary fampivoarana mampientanentana amin'ny fanodinana fako sy fako indostrialy
Toro-kazo tsy misy aliminioma ho an'ny kaopy miody eo noho eo
Fampidirana ny takelaka tsy vita amin'ny aliminioma
Tantera foil tsy misy alimo miaraka amin'ny tsy aliminioma, mety amin'ny vilia taratasy, PP ary PS.
150 micron PP Plastika K Cup tombo-kase tombo-kase Embossed famehezana hafanana
Saron'ny tombo-kase plastika K Cup dia vita amin'ny sarimihetsika PP. Izy ireo dia ampiasaina mba hahazoana kalitaon'ny fanontana avo lenta, mora esorina amin'ny fonosana ary tsy rovitra mandritra ny fitaterana sy ny fizarana.
Savaivony 72mm 73mm 90mm rakotra kaopaly paty eo no ho eo
Ny lambam-boninkazo mofomamy eo noho eo dia manome fiarovana tsara amin'ny fifindran'ny oxygen sy ny etona amin'ny rano (hamandoana), ary koa ny fanakanana ireo hanitra manitra ka mahatonga azy io mifanaraka amin'ny vokatra mora tohina.
LOGO Voahosotra pirinty paty eo no ho eo pirinty mikatona mora foana ny triatra
Ny lovia fanaovana tombo-kase paty eo noho eo PET dia safidy amin'ny rakotra aluminium. Fototra PET misy: fotsy, mangarahara, metaly.
Famehezana peat vita pirinty vita amin'ny fonon-tavoahangy roa minitra
Famaritana: saron-kazo voapaika maty
Endrika: boribory sy kianja
Hateviny: mikraoba 100-250 aorian'ny embossed
Size & Color: azo namboarina
Fanontana: loko 1-9 amin'ny fanontana gravure, loko 1-6 amin'ny fanontana offset, famolavolana ary logo dia omen'ny mpanjifa.
Diameter: ø27mm-200mm Manana endrika maherin'ny 100 maty voapaika ho an'ny safidinao ianao
Fonosana: kitapo plastika-boaty taratasy- baoritra taratasy-pallet mihinjitra
Tondra-drano miendrika savony Instant PE Piara plastika
Lisitry ny plastika PE plastika vokatra mahazatra izay hamehezana ny kaontenera PS, PP, PET ary PE.